Hadday sidaas tahay, ka dib si aad u hesho marinka ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, kuwa raadinaya talo waxay noola soo xiriiri karaan shaqsi ahaan, taleefan, iimayl iyo, haddii loo baahdo, si qarsoodi ah. La talinta sidoo kale waa suurto gal haddii qofka uusan haysan ogolaanshaha joogitaan oo sax ah. Waxaan u shaqeyneynaa si ka madax bannaan hay’adaha dowladda iyo xisbiyada siyaasadeed. Dhammaan xafiisyada gobollada si ballaadhan iyo qaab dhismeed ahaanba waan uga soocan nahay maamulada iyo hay’adaha dawladda.